I-50 YEENWELE EZIBALASELEYO ZAMADODA AMNYAMA: IINWELE EZIPHOLILEYO ZE-GUY EZIMNYAMA ZE-2021 - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ukucheba iinwele okungcono kwamadoda aMnyama
Ukufumana ezona zilungileyo iinwele zamadoda amnyama ukuzama kunokuba ngumceli mngeni ukuba awuqinisekanga malunga nokuba zeziphi iindlela ezintsha ezikhoyo phaya. Iinwele eziphezulu zamadoda amnyama zihlala zinenwele ephantsi okanye ephezulu yokucheba ngeenwele ezimfutshane ezibhalwe ngenye indlela ngaphezulu. Kodwa ngazo zonke iindlela zamvanje zeenwele zamadoda amnyama, abafana zange babenazo izimbo ezininzi ezifanelekileyo ukuzama. Ukuba ujonga i-taper fade entsha yokucheba iinwele njengomntu omnyama, esi sikhokelo kwezona zishushu zithandwayo kunye nefashoni kunye nezitayile ziya kukunceda ukhethe ukubukeka okupholileyo. Ukukukhuthaza ngezimvo, jonga ezi zinwele zipholileyo zingama-50 zamadoda amnyama ukufumana kulo nyaka.
1Amadoda aMnyama aMnyama ahamba phambili
MbiniUkuphela okuphezulu okuphezulu
4Icandelo elifutshane kunye noPhela
Shumi elinanyeIzinwele ezipholileyo zaMadoda aMnyama
11.1Ukuphela kwethempeli ngeSiponge Twists
11.2Curls ezijijekileyo ngeDrop Fade
11.3Mfutshane kwiAfro Fade kunye neMilo ePhakamileyo
11.4Ulusu oluphezulu luphela kunye neFlat ephezulu
11.5Phakathi koLusu luphela kunye neHard Part kunye neAfro
11.6Ulusu luphela kunye neenwele eziGobileyo kunye neendevu
11.7Faux Hawk Fade kunye noyilo lweenwele
11.8Frohawk kunye neBurst Fade
11.9Isiqingatha seNyanga Icandelo lokucheba iinwele ngoKuphela koLusu
11.10Mfutshane kwiAfro Fade ngeEdge Up
11.11Ulahle iphela ngeCurly Frohawk
11.12Ulusu olusezantsi luphela ngeBuzz Sika kunye neMilo ePhakamileyo
11.13I-Curly Afro Mohawk Fade kunye noyilo lweenwele
11.14Ukuphela kweAfro Taper Fade
11.16Amaza kunye neMilo ePhakamileyo
11.17Iingwele ezinde ezinesikhumba esiphakamileyo
Amadoda aMnyama aMnyama ahamba phambili
Ukusuka phezulu phezulu kunye ne-afro fade ukuya kumaza kunye nomgca, ezi zinwele zamadoda amnyama zishushu, zilula, kwaye zinestayile.
I-haircut ephezulu yeklasikhi ephezulu ibuye kuyo yonke ubuqaqawuli bayo be-90. Ikwabizwa ngokuba yibhokisi esikiweyo okanye ibhokisi ephelileyo, ukuphela okuphezulu okuphezulu sisimbo esibukhali nesilungelelanisiweyo esifanelekileyo kwabo bafuna ukulawulwa kodwa iinwele ezinamandla.
Uhlobo lubandakanya ukuphela komgangatho wentamo, ngamacala amafutshane kunye nee-intshi ezintathu zeenwele ngaphezulu. Icandelo eliphezulu leenwele lisikwe kwimilo yoxande enika ibhokisi iphele igama layo. Abanye baya kwiinwele ezinde ngaphezulu, ngelixa abanye bekhetha ukuzigcina zimfutshane kwaye ziqinile.
Indlela oyitayitayo ngayo itheyibhile ephezulu ixhomekeke kukhetho lwakho. Umzekelo, amanye amadoda amnyama akhetha ukufiphala okuphantsi okanye okuphezulu okuphezulu ngamalungu okanye ukufiphala kwetempile okunoyilo lweenwele.
Ekugqibeleni, iflat yokucheba iinwele ephezulu iklasikhi kubafana abamnyama, ke cela umchebi wakho ngale ndlela ngexesha elizayo xa unyukele ukucheba iinwele.
Njengenye yeenwele ezilungileyo kakhulu zamadoda amnyama, i-afro fade imalunga namacala amafutshane kunye nomphezulu osikiweyo oshushu. Ngaphandle kwesondlo esincinci kunebhokisi ephelayo, i-afro fade ene-curly twists yinto eyahlukileyo yebhokisi esikiweyo, ivumela ukukhula kweenwele zendalo ngaphezulu.
Amacala kunye nomva kweenwele ziphelile, zisezantsi okanye zolusu / zinempandla. Ngokuchasene ngokupheleleyo nokuphela kwetaper, malunga nee-intshi ezi-3-5 zeenwele ezishiyekileyo entlokweni ukuze zikhule kunye nesitayile nangayiphi na indlela oyithandayo.
Ngapha koko, i-afro ephezulu inokuba nde okanye imfutshane ngee-curls, ukujija , okanye inabukeni iinwele ezimnyama zokugqibezela. Ngokubanzi, i-afro fade yinqobo yendoda emnyama emnyama esebenza ngokugqibeleleyo ngeenwele ezimnyama.
Icandelo elifutshane kunye noPhela
Umgca wenxalenye emfutshane sisitayile esidumileyo nesothusayo esilula ukuphuma. Nokuba zinokuba mfutshane kwaye zingqindilili njani iinwele zakho, cela iinwele zakho ukuba zichebe kwilayini enzima kwicala ngalinye lentloko.
Inxalenye yongeza i-asymmetry enganqunyanyiswanga kwisitayile, ibonisa izitayile ezinje ngecala lecala okanye i-undercut engaqhawulwanga. Ngcono okwangoku, indawo ende yotyando inokuba yinto enye yoyilo lweenwele ezipholileyo oqoshwe kwifade yakho.
Ukufezekisa kwabo bathanda ukugcina iinwele ezibukhali nezicocekileyo, umgca wongeza isitayile kunye nolwakhiwo kwizinwele zakho. Eyaziwa ngokuba ngumda okanye umilo, i-barber yakho iya kucoca umgca ngqo ebunzini lakho kwaye ujikeleze iitempile zakho ukwenza ukubukeka kwe-boxy okubeka ubuso bakho.
Kumadoda amnyama adlala ukunqunyulwa kwe-buzz, amaza , okanye iinwele ezipholileyo zokuphela iinwele, umgca up yindlela eyahlukileyo nesebenzayo yokugxininisa umhlathi omeleleyo kunye nobuso obuqingqiweyo.
Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba iinwele ziyakukhula ngokukhawuleza, ke ukuba neziqhoboshi ekhaya ukulungiselela ulondolozo rhoqo kunokukunceda uzigcine zicocekile.
Inkqubo ye- wave Isitayile esahlukanisayo kwihlabathi leenwele. Umchebi wakho uya kuwuthanda okanye awuthiye, kodwa ukusikwa kukuwe. Uzakufuna izixhobo ezizodwa kunye nemveliso ukugcina le nwele, eyona nto ibaluleke kakhulu ibrashi yomtshangatshangiso kunye neenwele ezishinyeneyo.
Thetha kumchebi wakho kwaye ubone ukuba bacinga ukuba iinwele ezitshangatshangiswayo zingasebenzela indlela yakho yokuphila kunye nohlobo lweenwele.
Amadoda amnyama aneenwele ezigobileyo zihlala zikhangeleka zintsha kwaye zihamba kakuhle. Ukuba iinwele zakho azinalo uhlobo lwee-curls eziqinileyo ezifunekayo kwi-afro fade kwaye endaweni yoko ifana ne-ringlets, ii-curls ezikhululekileyo nge-fade okanye i-undercut inokuba lukhetho olukhulu kuwe.
Iinwele ezinokuphela kweenwele zezinwele ngokuqinisekileyo zithandwa ngabantu abamnyama. Amacala aphelileyo kunye nasemva kubonelela ngokungafaniyo ngokuqinileyo kwii-curls ngaphezulu, ezinokubhalwa ngokungahambelani kunye nokudakumba okanye ukwahlula ecaleni.
Iyasebenza, incinci, kwaye imfutshane kakhulu: i-buzz cut yi-hairstyle ekhethiweyo yamadoda amaninzi amnyama. Kulabo bathanda ukudlala imidlalo kwaye abathandi ukujongana neenwele ezinzima, i-buzz cut is perfect.
Ukuba uza kusebenza yonke imihla, ukusikwa kwe-buzz kujongeka kubukeka kwaye kucocekile ngalo lonke ixesha, kunye nolondolozo oluncinci kakhulu olufunekayo. Ngeziqhoboshi zakho, ungayigcina le ndlela kwaye uyenze ngokwakho rhoqo ngokucheba yonke intloko yakho ngobukhulu obufanayo bokugada.
I-mohawk fade, ekwabizwa ngokuba yi-frohawk, yenye yeenwele ezimnyama zakudala, kwaye ijongeka intle nokuba une curls eziqinileyo okanye iiringi ezibanzi. I-Mohawk iphele iinwele zamadoda amnyama zibonelela ngenkangeleko yefashoni kunye epholileyo ngaphandle kwesidingo semveliso eninzi.
Ngokulula kwaye kulula ukuyifumana, iinwele ze-mohawk zifuna nje a ukuhla okanye ugqabhuke usiba emacaleni ngeenwele ezishinyeneyo, ezinde phezu kwentloko.
Abanye abantu bathanda amacala amafutshane kakhulu ngesikhumba, ngelixa abanye bathanda itaper ephezulu iphelela entanyeni. Nokuba yeyiphi na indlela, iinwele zodidi, ziyatsala, kwaye yindlela efanelekileyo yokubonisa ubume beenwele zakho zendalo ngokusikwa kwesitayile.
Ukujija ibe yinto ephambili yamadoda amnyama, kodwa ukongeza ukuphela kwisitayile seklasikhi kongeza ukubaluleka kwale mihla. Ngaphambi kokuba usike, uyakudinga ubuncinci ii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-4 zeenwele ngaphezulu kwentloko yakho.
Into epholileyo malunga nokujiya ngenwele okupheleyo kukuba ukuphela kumacala kuvumela ukwahluka. Umzekelo, unokufumana indawo ephezulu, ephantsi, yolusu, okanye yokuqhuma. Iinwele zokugqibela ziya kuhlala zikhangelekile kwaye zahlukile.
Izinwele ezipholileyo zaMadoda aMnyama
Uninzi lweenwele zamadoda amnyama, kungcono ubonise kunokuba uxelele umchebi wakho into oyifunayo. Njengesikhokelo, phawula okanye ugcine le galari yemifanekiso ukuze uqhubekise umchebi wakho kwicala elifanelekileyo.
Ezi zinwele ziphambili zamadoda amnyama zezinye zezona fashoni zintsha kulo nyaka, ke thabatha umfanekiso uhambe nawo ukuya kwindawo yokucheba iinwele kwaye ufumane eyona nwele ilungileyo ebomini bakho.
Ukuphela kwethempeli ngeSiponge Twists
Curls ezijijekileyo ngeDrop Fade
Mfutshane kwiAfro Fade kunye neMilo ePhakamileyo
Ulusu oluphezulu luphela kunye neFlat ephezulu
Phakathi koLusu luphela kunye neHard Part kunye neAfro
Ulusu luphela kunye neenwele eziGobileyo kunye neendevu
Faux Hawk Fade kunye noyilo lweenwele
Itshathi yomqondiso welanga nenyanga
Frohawk kunye neBurst Fade
Isiqingatha seNyanga Icandelo lokucheba iinwele ngoKuphela koLusu
Mfutshane kwiAfro Fade ngeEdge Up
Ulahle iphela ngeCurly Frohawk
Ulusu olusezantsi luphela ngeBuzz Sika kunye neMilo ePhakamileyo
I-Curly Afro Mohawk Fade kunye noyilo lweenwele
Ukuphela kweAfro Taper Fade
Amaza kunye neMilo ePhakamileyo
Iingwele ezinde ezinesikhumba esiphakamileyo
yintoni inyanga yam kunye nophawu oluphumayo